नियामक निकायको अकबरी फतवाले लाखौँ लगानीकर्ताको अरबौँ सम्पत्ति बन्धक ! - Laltin Media
Home»सेयर बजार»नियामक निकायको अकबरी फतवाले लाखौँ लगानीकर्ताको अरबौँ सम्पत्ति बन्धक !
नियामक निकायको अकबरी फतवाले लाखौँ लगानीकर्ताको अरबौँ सम्पत्ति बन्धक !
नेपालको सन्धर्भमा कुनै पनि दुई या बढी कम्पनी मर्जरमा जाँदा ती कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोक्का हुने गरेको छ । साथै, अक्कुइजिसन गर्दा सानो कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का हुने परिपाठी छ । हालसालैको उदाहरण दिँदा नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई अक्कुइजिसन गर्न लाग्दा नेपाल बंगलादेश बैंकको सेयर कारोबार रोक्का छ । त्यस्तै, धेरै अगाडि देखि मर्जरमा जाने भनेका हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको पनि सेयर कारोबार महिनौँ देखि रोक्का छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीमा हिमालयन जनरल र एभरेस्ट इन्स्योरेन्सलाई गाभिन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । तिनीहरुको पनि सेयर कारोबार रोक्का छ । साथै, मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका तीन जीवन बीमा कम्पनी प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार पनि रोक्का भएको छ ।
यस्तै, हाइड्रो सेक्टरमा रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (आरएचपीसी) बीच मर्जरको सम्झौता भएसँगै सेयर कारोबार ठप्प छ । “यो कुरा सुन्दाखेरि सामान्य लागे पनि यसले निम्त्याएका परिणामहरु र विकृतिहरु निकै घातक छन्,” सेयर विश्लेषक विष्णु प्रसाद बस्याल बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको मर्जर एक्कुइजिसन सम्बन्धि विनियमावली २०७३ बाहेक अन्य कुनै पनि सेयर सम्बन्धि नियमावली र डाइरेक्टीभ्समा कम्पनी मर्जरमा जाँदा सेयर रोक्का गर्नुपर्ने प्रावधान छैन । राष्ट्र बैंकको सो विनियमावलीको ६ नं. बुँदामा ‘संचालक समितिबाट निर्यण गरी नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडबाट गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का गरिएको पत्र सहित सैद्धान्तिक सहमतिका लागि विषय खुलाई राष्ट्र बैंकमा संयुक्त रुपमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा पनि कहीँकतै मर्जर अक्कुइजिसनमा जाँदा सेयर कारोबार रोकिएको देखिँदैन । यसकारण, बैंक वित्तलाई मर्जर-एक्कुइजिसनमा जाँदा सेयर कारोबार रोक्ने जुन प्रावधान छ, त्यो कत्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाँदैन र उचित पनि छैन । राष्ट्र बैंकले उक्त सेयर रोक्का राख्ने प्रावधान हटाउँदा आम लगानीकर्तालाई राहत हुनेछ ।
विश्लेषक बस्याल भन्छन्, “बैंकिङ तथा वित्तिय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिका लागू हुन्छ भनेर कारोवार रोक्का गर्नु शायद कानुनसम्मत होला तथापि राष्ट्र बैंकको सो निर्देशिकाको पनि कुनै आवश्यकता छैन। राष्ट्र बैंकले सो निर्देशिकामा संशोधन गर्नु आवश्यक छ। तर बीमा वा अन्य क्षेत्र का कम्पनी हरुमा कारोबार रोक्नु गैर कानुनी हो। किनकी बीमा समिति वा विद्युतीय नियमन निकायबाट कुनै पनि निर्देशिकामा सेयर कारोबार रोक्नु पर्छ भनेर लेखिएको छैन।”
यो सेयर रोक्का राख्ने विषय विशुद्ध आन्तरिक मिलिभगतमा भएका अनियमितता हुन् । साथै, यसले इन्साइडर ट्रेडिङ्गको खतरनाक स्वरुप पनि बाहिरिएको छ । हालसालैको मर्जर घोषणा हुनु अघि इन्साइडर इन्फर्मेसनको आधारमा अन्तिम कारोबार दिनमा प्राइम लाइफको १३४ooo कित्ता, युनियन लाइफको १२७००० कित्ता र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स ६९००० कित्ता सेयर बिक्री भएको छ । जबकी, यी कम्पनीहरुको सामान्य कारोबार दुई दिन अघि क्रमश: ६०००, १९००० र १३००० कित्ता मात्र छ । “यति विधि लुट मच्चाएर आम लगानीकर्तालाई ठग्दा पनि नियमनकारी निकाय किन मौन छ?,” कड्किए बस्याल ।
अर्को कुरा मर्जर एक्कुईजिसनले सेयर कारोबार रोकिँदा आम लगानीकर्ताको चल सम्पत्ति बन्धक भएर भारी नोक्सानी र राज्यले पाउने राजस्वमा समेतमा नकारात्मक असर परेको छ । यसबारेमा सम्बन्धित नियामक निकायको ध्यानाकर्षण होस् र यी रोक्का गरिएका कारोबार छिट्टै खुलोस् भन्ने आम-लगानीकर्ताको चाहना हो। यस कुरालाई नजरअन्दाज गरेमा हाम्रो मिडियामार्फत् हामीले तबसम्म खबरदारी र ताकेता गर्नेछौँ, जबसम्म आम-लगानीकर्ताको जीत हुँदैन ।
#अकबरी फतवाले लाखौँ लगानीकर्ताको अरबौँ सम्पत्ति बन्धक !